Dowlada KMG oo cabasho ka gudbineyso Kenya oo shidaal qodis ka bilaabeyso xeebta koonfureed ee Somalia
Updated About:322 days ago 1
Dowlada KMG Soomaliya ayaa maanta cambaareysay heshiis ay dowlada Kenya ku siisay laba shirkadood oo ah kuwa shidaalka qoda in ay ceelal ka qodaan xeebta lagu muransanyahay ee Kenya iyo Somalia.
Xeebtan oo ku taala koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa sheeganeysa dowlada Kenya iyada oo xukumadi Ra’isulwasaarihi hore Cumar C/rashiid Sharmaarke ka saxiixatay in ay iyada leedahay taasi oo marki danbe uu diiday baarlamaanka Soomaaliya.
Kenya ayaa ku abaal marisay shirkadaha gaaska iyo shidaalka qoda ee Total iyo Eni in ay ceelal ka qodaan gunta bada Soomaaliya gaar ahaan dhanka koonfureed si sharci daro ah, waxaana tani ay keeneysaa in xiriirka labada dal uu xumaado.
Aaga ay haatan damacsantahay in ay Kenya ka xoogto Soomaaliya ee bada ayaa lagu sheegaa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee uu dhex ceegaago shidaalka ceyriin, waxaana wararku ay leeyihiin waxaa ay taasi keeni doontaa in Kenya iyo Soomaaliya ay meel xun ka gaarto, maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed ayaa si weyn u diidan arintaan.
Wasiir ku xigeenka tamarta Soomaaliya, Abdullahi Dool ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Rueters in ay ka xunyihiin in Kenya ay isku daydo in afar meel ay ka qodo ceelal gaar ahaan kuwa laga baaro gudaha bada taasi oo uu ku tilmaamay sharci darro.
Waxa uu wasiirka sheegay in ay warqad cabasho ah u qorayaan Qaramada Midooaby maadaama Kenya ay ku xad gudbeyso xadka caalamiga ah ee dhanka xeebaha.
Qorshaha shidaal qodista Kenya iyo shirkadaha qandaraaska lagu siinayo ayaa bilowday todobaadki lasoo dhaafay marki ay Kenya 7 meelood u ogolaatay laba shirkadood in ay shaqo ka bilaabaan, 3 ka mid ah waxaa la siiyey shirkada Eni ee dalka Talyaaniga halka mid kalana loo saxiixay shirkada Total ee dalka France .
said says:	July 8, 2012 at 7:45 pm	bismillaah. aniga waxaa iga yaabiyay sida kenya ay umada soomaaliyeed hantideeda u dhacayso. oo ay uliidayso waaba ay saxiixday heshiiskaan iyada talyaaniga fransiiska, iyadoo soomaaliya aan lalatashan. lagana faaidaysanayo dacfiga aan ku jirno ilaah waxaan waydiisanaynaa duligaan inuu naga bixiyo